Ogaden News Agency (ONA) – Ingriiska oo Dhimay Lacagtii ay Siin Jireen Booliska Itobiya, Qaylo Kasoo Yeedhay Xuquuqda Aadanaha Darteed
Ingriiska oo Dhimay Lacagtii ay Siin Jireen Booliska Itobiya, Qaylo Kasoo Yeedhay Xuquuqda Aadanaha Darteed
Wargayska The Telegraph ee kasoo baxa dalka Ingriiska ayaa sheegay in la joojiyay intii ugu badnayd 27Milyan oo Giniga Ingriiska oo lasiin jiray Booliska Itobiya, taasoo ay ku sheegay wargayska inay ka dambaysay ka dib markii eeda badan ay ka timid xukuumadda Itobiya oo ku saabsan Jidd-dil, Kufsi iyo Dil badheedha ah.
Waxuu wargaysku tilmaamay in mashruuc loogu talagalay horumarinta habka baadhitaanka dambiyada oo booliska Itobiya iyo bulshaweynta ka dhexeyn lahaa laga joojiyay miisaaniyadii loogu talagalay. Arintan ayaa ka dambaysay ka dib markay Amnesty International soo saartay warbixin ku saabsan sida ay booliska Itobiya u qaadaan olole argagixin ah oo dadka xubnahooda la jarjarayo, kufsi iyo dilal joogta ahna loo gaysanayo si mucaaradka siyaasadeed loo cabudhiyo.
Dawladda Ingriiska ayaa deeqda ugu badan siisa Itobiya waxayna bixisaa lacag gaadha 1milyaar oo Gini (1.6billion dollar) sanadkii, oo 70 Milyan oo ginni (113 milyan oo doolar) oo ka mid ah loo qoondeeyay mashaariicda amniga iyo waxay ugu yeedheen dawlad wanaaga. Wargayska The Telegraph ee warbixintan qoray ayaa yidhi, waxaa meesha ka baxday Dhaliilihii xisbiga xukuma dawladda Ingriiska dhexdiisa ahayd, iyadoo ay Amnesty International hayaan cadeymo muujinaya rag indhaha laga soo saaray iyo haween saf loo galay oo lagu gubay dhamac kulul, arimahaa oy gaysteen saraakiisha dawladda Itobiya.
Waxuu wargaysku intaa raaciyay in cabsi laga qabo nolosha Mr. Andy Tsege (Ku-Xigeenkii xisbiga G7) ee laga afduubay Yemen, ninkaa oo haystay dhalashada dalka Ingriiska oo Itobiya ay horey ugu xukuntay dil.
Dawladda Ingriiska ayaa dhankeeda ku andacoonaysa in joojinta lacagtan ay ka horeysay warbixinta Amnesty Intern. oo aanay shaqa ku lahayn xad-gudubyada laga soo warinayo Itobiya.
Wargayska ayaa ka warmaya arima badan oo muujinaya is-daba marin iyo warbixino ku saabsanaa qiimaynta sanadlaha ah oo laga saaray shabakadda Waaxda Horumarinta Dawliga ee Ingriiska (Department Of International Development DfID). Waaxdan ayaa maalgalisa mashaariic badan oo ka socota Itobiya hasa ahaatee lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo in hab siyasadaysan uu xisbiga EPRDF u adeegsado mucaawanada loogu talagalay dadweynaha in sinaan loo gaadhsiiyo, isla marahaantaana aanay haya’dan ku samaynin dabagalkii loo baahnaa.
Ka saaridda shabakadda DfID warbixinadii ku saabsanaa Itobiya ayaa waxaa soo helay Haya’adda Reprieve (Halkan Riix) oo dadka dilka lagu xukumo u dooda. Haya’addan ayaa u doodaysa soo daynta Mr. Tsege.
Waxay tidhi gabadha Maya Foya oo madaxda ka ah kooxda dilka diidan; ” Iyadoo Mr. Tsega lagu hayo xabsi Itobiya oo qarsoon oo dil uu ku xukuman yahay, ayaa siyaabo aan la fahmi karin looga wada tirtiray shabakadda waaxda DfID maalgalintii mashaariicdaa ku saabsanayd.” Waxay intaa raacisay; “Waxaa laga rabay dawladda Ingriiska inay adeegsato awoodeeda si loo ilaaliyo nabadgalyada muwaadin ka mid ah dalka Ingriiska, ee ma’ahayn in mucaawana la siiyo isla haya’dii Itobiya ee soo afduubtay muwaadinkaa, ka dibna laga saaro shabakadda warbixinadii ku saabsanaa arintaa.”
Warbixinta wargayska ayaa waxaa kaloo ka mid ahaa in mucaawanada uu Ingriiska bixiyo sii dhiirigaliyo un musuq-maasuqa iyo laaluushka ka socda dawladaha lasiiyo deeqda.